RW Rooble oo safar deg deg ah ku tagaya dowlad Goboleedyada - Awdinle Online
RW Rooble oo safar deg deg ah ku tagaya dowlad Goboleedyada
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka sheegay Shirka Madasha Iskaashiga Soomaaliya iyo Caalamka in uu dhawaan booqashooyin ku tagayo Magaalooyinka Dhuusamareeb, Gaalkacyo & Garoowe ee Dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug.
Ujeedka safarka Ra’iisul Wasaaraha ayaa waxaa uu yahay sidii xal looga gaari lahaa Arrimaha doorashooyinka sigaar ah muranka ka dhashay guddiyada doorashooyinka ay Magacaawday dowladda, isaga oo kala hadli doona Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni.
Sidoo kale Ra’iisul Wasaaraha ayaa waxaa uu la kulmi doonaa Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye ( Qoor Qoor) oo door dhex-dhexaadin ah ka dhex-waday Madaxda Dowladda & musharixiinta Mucaaradka, kuwaas oo kasoo horjeestay guddiyada doorashooyinka ay dowladda Magacaawday.
Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa sidoo kale sheegay in Madaxda Dowladda & Dowlad Goboleedyada ay shir isugu imaanayaan magaalada Muqdisho si ay uga arrinsadaan Arrimaah doorashooyinka dalka.
Muran ayaa hareeyay doorashooyinka Soomaaliya, kaas oo la xiriira in Musharixiinta Madaxweynaha iyo Xubnaha mucaaradka ay diideen Guddiyada doorashooyinka oo ay Magacaawday dowladda Soomaaliya, iyaga oo sheegay in aan kalsooni lagu qabin,isla markaana laga soo xulay Hay’adda NISA & Shaqaalaha dowladda.
Previous articleMadaxweynaha Puntland oo dowladda ugu baaqay inay Ciidamada kala soo baxdo gobolka Gedo
Next articleKhilaafka Soomaaliya & Kenya oo saameyn xoogan yeeshay